Lacag loo uruuriyay canug dhib lagu hayay soo duubay oo gaartay $300,000 |
“Taasi waxa ay xoogsheegashadu horseeddo,” ayey muuqaalka ku tiri, kaas oo wiilkeeda uu ku leeyahay waxaan doonayaa inaan isdilo.
Haatan bogga dhaqaalaha lagu uruuriyo ee GoFundMe ayaa waxaa lagu uruuriyay 30 laab in ka badan lacagtii bartilmaameedku ahaa ee gaaraysay $10,000.
Jackman ayaa waxa uu Quaden u sheegay “intaad og tahay waad ka awood badan tahay, saaxiib” qofkasatana waxa uu ugu baaqay inuu “naxariis yeesho”.
Iyadoo ka hadlaysay shir jaraa’id, ayey Ms Bayles waxa ay sheegtay in ay rajaynayso in waxa ku dhacay wiilkeeda ay sare u qadi doonto wacyigelinta ku aaddan saameyn ay xoogsheegashadu leedahay.
“Dad badan ayaa waxa ay nooga baxaan xoogsheegasho ama cadaadis, sababtoo ah faquuq iyo midabtakoor. Waxyaabo badan oo xoogsheegasho ah ayaa jira,” ayey tiri.
“Waa waxa ugu xun in waalid uu carruurtiisii waayo taasna waa arrin aan maalinwalba wajaho,” ayey tiri, iadoo intaas ku dartay in iskudayga dilka “ay dhab tahay”.
“Waxaa intaas dheer, in wiilkeyga uu gaaban yahay oo lixaadkiisu uu kala dhiman yahay dadku ma fahmaan in taasi ay tahay laba arrimood oo culus. Midabtakoorka iyo faquuqana waxa ay ku yimaadaan lixaadkiisa kala dhiman.”
“Wiilkeyga ayaa waxaan ka soo qaaday iskuulka, oo waxaan indhahayga ku arkay isagoo la cadaadinaayo, waxaan wacay maamulihii, waxaanan doonayaa inay dadku ogaadaan – waalidiinta, dadka waxbartay, macallimiinta – in taasi ay tahay saameynta ka dhalatay cadaadiska iyo xoogsheegashada,” Ms Bayle ayaa tiri xilli wiilkeeda ay ilmadu ka qubmaysay.
“Maalinkasta waxbaa ku dhaca. Xaalad kale, cadaadis kale, cay kale iyo magac u yeeris kale.
“Fadlan carruurtiinna, qoysaskiina, iyo saaxiibadiin wax ma bari kartaan?”
“Dadku inta ay nool yihiin maalinwalba qof gaaban ma arkaan, marka waxaa cad in warbaahintu ay qeyb ka qaadan karto sida bulshadu ay dadkaas ula dhaqanto.”
Jilaa Warwick Davis, oo wax ka aasaasay hay’adda Dadka Gaagaaban ee UK, ayaa sheegay in muuqaalka Quaden uu ahaa “mid aanan la daawan karayn”.
“Dhab ahaantii waa wax aad looga xumaado in arrimo noocaas oo kale ay weli maatna dunida ka dhacayaan. Waxaannu jeclaan lahayn inaannu bal u fakarno sida innagoo wax xanaanaynayna, oo khalqiga jecel, oo dhab ahaantii aannu wadnaheenna dareensiinoo, mararka qaar maba dhacaysee.
“Waxaan fliayaa in waalidiintu ay dowr ka ciyaari karaan arrimaha noocan oo kale ah. Waxbaristu gurigey ka bilaabataa oo waalidiinta ayey tahay inay qaadaan mas’uuliyadda carruurtooda iyo hab dhaqankooda dunida guudkeedaba,” ayuu yiri.